အမေဇုံယူကေတွင် ၀ ယ်ရန်နှင့်ပေါင်ပေါင်ကျခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း Gadget သတင်း
အမေဇုံယူကေတွင် ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ပေါင်ပြိုလဲခြင်းမှအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်
ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည်ဥရောပသမဂ္ဂမှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ဆန္ဒခံယူပွဲအပြီးတွင်ပြည်သူလူထုကအချိန်ကာလအားဖြင့်လွတ်လပ်ရေးရပြီးမည်သူ့ကိုမျှမမှီဘဲလမ်းတစ်လမ်းသို့လျှောက်လှမ်းရမည်ဟုကျဉ်းမြောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ Brexi ဟုလူသိများသောဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အကျိုးဆက်များဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်၊ အချို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများနှင့်အခြားသူများမှာမူပေါင်ခံစားနေရသောပြိုကျမှုသည်အံ့မခန်းဖွယ်ရာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ၁၉၈၅ ခုနှစ်သို့ပြန်သွားစေမည့်တန်ဖိုးများပင်ရှိသည်။
အဲဒါကကျွန်တော်တို့အများစုကိုနိုးထစေခဲ့တယ် အမေဇုံယူကေမှတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ဖြစ်ခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားမှု ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပြီးပေါင်ပြိုလဲခြင်းရဲ့အားသာချက်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများစွာကစပိန်ထက်အခြား Amazon စတိုးဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ယူရန်အလွန်အမင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသော်လည်း၎င်းကိုသင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နှင့်အခြေခံစည်းမျဉ်းအချို့ကိုလိုက်နာရန်လိုသည်။ တစ်ပေါင်ကိုလေးစားမှုနဲ့အတူလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ၁.၃၁ ယူရိုနဲ့ကုန်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားသင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ရဲ့တန်ဖိုးကယူရို ၁.၂၀ ဖြစ်ပြီးကျဆင်းမှုကဆက်ရှိနေတယ်။
1 ရိုးရိုးလေးနည်းဖြင့် Amazon UK မှမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း
2 Amazon Premium service ကိုသုံးလို့ရလား။
3 သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည့် Chrome Currency Converter
4 အမေဇုန်ယူကေကနေ ၀ ယ်တာကတကယ်ပဲထိုက်တန်ရဲ့လား။
ရိုးရိုးလေးနည်းဖြင့် Amazon UK မှမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း
အမေဇုံယူကေသို့ဝင်ရောက်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနီးပါးသို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါးမိမိကိုယ်ကိုမေးသောပထမမေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင့်အသစ်ရှိရန်လိုအပ်သည်လား။ ဤမေးခွန်း၏အဖြေသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောစကားမဟုတ်ပါ Amazon စပိန်မှာသုံးတဲ့အကောင့်ကိုသုံးနိုင်တယ်.
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အသေးအဖွဲတစ်ခုမှာပေးဆောင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကပေါင်ပြိုလဲခြင်း၏အားသာချက်ကိုယူခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်၊ ယူရိုငွေဖြင့်မဟုတ်ဘဲပေါင်ဖြင့်ပေးဆပ်ရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Amazon UK မှာပေါင်ကနေယူရိုအထိပြောင်းလဲမှုကိုရှာရန်မည်သူမျှမမျှော်လင့်ပါ၊ ၎င်းသည် Jeff Bezos မှဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲမှုကိုအမှတ်အသားပြုပြီးကတည်းကတရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာဒီဆောင်းပါးကိုရေးတဲ့အချိန်မှာပေါင်ဟာ ၁.၂၀ နဲ့ Amazon က ၁.၂၄ မှာအပြောင်းအလဲရှိတယ်။
Amazon UK တွင် ၀ ယ်ယူသောအခါငွေစုသည်ပိုမိုများပြားနိုင်သည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သို့သော် Amazon တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ထုတ်ကုန်အမြောက်အမြားတွင်စုဆောင်းမှုနည်းပါးသည်။
Amazon Premium service ကိုသုံးလို့ရလား။
အမေဇုံပရီမီယံ ၎င်းသည် Amazon ၏အထင်ရှားဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားအရာများအပြင်ကုန်ပစ္စည်းအချို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်အချိန်တိုအတွင်းအိမ်တွင်၎င်းတို့ကိုလက်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ Amazon ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ၀ ယ်ယူသောကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရရှိရန်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသင့်တိုင်းပြည်ရှိအခြားစတိုးဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ရန်မရရှိနိုင်ပါ။
Amazon Amazon တွင် Amazon Premium အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သင်သွေးဆောင်ခံရပါကဤ ၀ န်ဆောင်မှုမှရရှိသောအားသာချက်များကိုနိုင်ငံရှိနေထိုင်သူများကသာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်သာရယူနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးရပြီး ၀ ယ်ထားသောထုတ်ကုန်များကိုလက်ခံရရှိရန်ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုစောင့်ရမည်။ အကယ်၍ သင်ဟာတစ်ခုခုကိုသိမ်းဆည်းထားမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသွားတော့မယ်ဆိုရင်တွက်ချက်သူတစ်ယောက်ဟာတွက်ချက်ရမယ့်မဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည့် Chrome Currency Converter
Amazon UK မှတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းအချို့၏စျေးနှုန်းကိုစစ်ဆေးရန်သင်ပိုမိုအကူအညီလိုပါကသင်သည်အမည်ဖြင့်နှစ်ခြင်းခံပြီးသောဝစ်ဂျက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ခရုမ်းငွေကြေးလဲလှယ်မှု။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ငွေကြေးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်သောကွဲပြားသောစတိုးဆိုင်များ၏စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမြင်စေလိမ့်မည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြခဲ့တယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူကေမှာယူရိုစျေးနှုန်းကိုကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အမေဇုန်ယူကေကနေ ၀ ယ်တာကတကယ်ပဲထိုက်တန်ရဲ့လား။
စစ်ဆေးရန်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုယူပြီးသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်လွယ်ကူသည်။ ငါကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာပါ၊ ဥပမာ Huawei P9 နဲ့၊ ငါတို့ယူရိုအနည်းငယ်ကိုချွေတာနိုင်တယ်၊ သိပ်မများပါဘူး၊ အိမ်မှာ terminal ကိုလက်ခံဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်တွက်ထားတယ်။ စောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်သည်အရေးမကြီးပါက၊ သင်သည်ယူရိုအနည်းငယ်ကိုချွေတာနိုင်သည်။
ပေါင်သည်လက်ရှိပြုလုပ်နေသည့်အဆင့်သို့ဆက်လက်ကျဆင်းသွားပါက Amazon UK နှင့်အခြား UK စတိုးဆိုင်များတွင်ဈေးဝယ်ခြင်းသည် ပို၍ ပင်အကျိုးအမြတ်များပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာလိမ့်မည်။
အများအားဖြင့်ဤကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ထင်မြင်ချက်နှင့်အကြံဥာဏ်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ပျက်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ။ Amazon UK ကို ၀ ယ်ယူခြင်းဟာအတော်အတန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ဝယ်ယူမည့်အရာနှင့်စပိန်တွင်ဤထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းများနှင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်တဟုန်ထိုးတက်လာနိုင်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုသင်ကောင်းစွာကြည့်ရှုရန်လိုသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရုမစိုက်ဘဲဂရုမစိုက်ဘဲ ၀ ယ်ပါကယူရိုအနည်းငယ်ချွေတာမည်ဟုထင်ကောင်းထင်မည်။ သို့သော်အမေဇုံသည်ပေါင်နှင့်အပြောင်းအလဲကိုသက်ဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုကိုစစ်ဆေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အံ့သြသွားနိုင်သည်။
စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ အကဲဖြတ်ရန်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ၀ ယ်ရန်အတွက်ရှုထောင့်အားလုံးကိုကြည့်ပါ.
ယနေ့အမေဇုံယူကေတွင် ၀ ယ်သင့်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဤစာမူအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နေရာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါ။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသိလိုကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » အမေဇုံယူကေတွင် ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ပေါင်ပြိုလဲခြင်းမှအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်
Lumia 950 သည် Windows 10 Mobile ပါ ၀ င်သောကောင်းမွန်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်